Tuesday, 04.07.2020, 02:56pm (GMT+5.5) Home Contact
योभन्दा लाजमर्दो स्थिति अर्को छैन
Monday, 02.06.2012, 03:11pm
नेपालको सर्वाधिक अस्तव्यस्त निकायहरूमध्येमा पर्दछ शैक्षिक क्षेत्र । राजनीतिको सर्वाधिक प्रहारको क्षेत्र पनि शैक्षिक प्रतिष्ठान नै हुन् । विद्यार्थी संगठनहरूले त विद्यालय, उच्च विद्यालय कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई आ–आफ्नो संगठनको राजनीतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनाएकै थिए केही वर्षयतादेखि शिक्षक र अभिभावक पनि सोही कर्मको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
बेमौसमी बाजाले मनोरञ्जन दिंदैन
Monday, 01.30.2012, 03:31pm
बाजा बजाउनुपर्ने समयमा बजायो भने त्यसले मनोरञ्जन दिन्छ । आधारातमा मसानघाटमा गएर बजाइएको पञ्चेबाजाको कुनै अर्थ हुँदैन । बाजा जन्तीको अघिअघि बजाएको मात्र सुहाउँछ । मलामी जाँदा पञ्चेबाजा बजाइदैन । त्यस्तै कुनै पनि काम कुरा समय र परिस्थिति अनुसार गर्यो भने मात्र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्दछ ।
समावेशीको नाममा भँडुवा नीति
Monday, 01.16.2012, 04:46pm
दलित–जनजातिका नाममा खुलेका पार्टी बाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका अधिकांश राजनीतिक दलको शक्ति बाहुन–क्षेत्रीहरूकै नियन्त्रणमा छ । समावेशीताको नारा चर्कोसंग घन्काउने एकीकृत नेकपा माओवादी नै समावेशी सिद्धान्तमा टिक्न सकेको छैन ।
भारत रिझाउन घातक शैक्षिक मान्यता
Monday, 01.02.2012, 03:47pm
राजनीतिकरणले थिलथिलो भएको नेपालको उच्चशिक्षाको क्षेत्र अब भारतको दवाव थेग्न पनि विवश हुनुपरेको छ । अघिल्लो साता प्रकाशित एउटा समाचारले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र यसको मूल्य–मान्यतामा समेत ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
भीडको मात्र निर्देशन मान्ने प्रवृत्ति
Monday, 12.26.2011, 04:00pm
मुलुकको कानुनमा छुवाछुत गर्न पाइँदैन । जातकै आधारमा कसैलाई भेदभाव गरे त्यो दण्डीय अपराध मानिन्छ । यस्तोमा एक दलितलाई उच्च जातका भनिनेबाट चुल्हो छोएकै निहुँमा कुटपिट गरी हत्या गरिन्छ भने त्योभन्दा निकृष्ट कार्य अर्को हुँदैन ।
राष्ट्रिय पोशाकको महत्व
Tuesday, 12.13.2011, 01:02pm
हरेक मुलुकको आफ्नै राष्ट्रिय पोशाक हुन्छ । नेपालको पनि आफ्नै राष्ट्रिय पोशाक छ– दौरा–सुरुवाल । यो नेपालीको परम्परागत पोशाक हो । यो पोशाक कुनै जात विशेषको नभएर राष्ट्रको पोशाक बनिरहेकोमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै दौरा–सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक होइन भन्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय पोशाकविहीन हुन पुग्यो ।
साँच्चै घटेको हो कि तथ्यांक लुकाएको ?
Tuesday, 12.06.2011, 11:48am
मंसिर १५ (डिसेम्बर १) विश्व एड्स दिवसको अवसरमा एउटा नेपालको एचआईभी÷एड्स सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक भयो । नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १२ हजारले एड्स संक्रमितको संख्या घटे । विश्व एड्स दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय एड्स तथा यौन नियन्त्रण केन्द्रले एक पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार एच.आइ.भी संक्रमितहरूको अनुमानित संख्या ५६ हजार पुगेको छ भने पहिचान भएको संख्या १८ हजार ६ सय २६ रहेको छ ।
असहमति जनाउन यत्रो हुँकार ?
Monday, 11.28.2011, 03:32pm
चर्चा शान्ति र संविधानको छ । अनि चर्चा राजनीतिक दलहरूभित्र मडारिइरहेको अन्तरद्वन्द्वको पनि छ । एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसभित्र मौलाइरहेको अन्तरद्वन्द्वले समग्र राजनीतिक क्षेत्रलाई तताइरहेको छ ।
राष्ट्रियताको नाराभित्र सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध
Monday, 10.24.2011, 03:21pm
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि भएका अनगिन्ती आन्दोलनहरूपछि स्थापित भएका वैधानिक शक्ति र हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय भूमिगत समूहहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध बारम्बार प्रहार गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रियताको विषयलाई नेता विशेषको व्यक्तिगत स्वार्थसंग जोडेर हेर्ने गरिएका कारण मुलुकमा यतिविघ्न समस्या उत्पन्न भएको छ कि त्यसको निवारण गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्छ । राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति दिनेहरूमा तराईलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्नेहरू बढी अग्रसर देखिएका छन् ।
मन्द बुद्धिको प्रभाव र आत्मामाथिको प्रश्न : वेदराज पन्त
Monday, 09.26.2011, 02:29pm
आत्मालाई अणुभन्दा पनि अणुतर भन्दिंदा कुनै सुप्त मनस्थितिको मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिले अर्कै कुरा सोच्छ । यति सानो आत्मा न कसैले देख्यो, न कसैले जान्यो ? कहाँ छ त आत्मा ? भनेर शंका मात्र गर्दैन, यसको अस्तित्व नै छ भन्ने ठान्दैन । तर दार्शनिक तत्ववेत्ता शास्त्रमा विश्वास गर्ने र शास्त्रको गूढ रहस्य बुझेको व्यक्तिले आत्मतत्वको अति सूक्ष्मतालाई विश्वास मात्र गर्दैन, प्रत्यक्ष साक्षात्कारै गर्छ ।
आधुनिक कालखण्ड र प्राच्य चिन्तन : वेदराज पन्त
Monday, 09.19.2011, 02:53pm
२१ औं शताब्दीको हलाला दिंदा पनि यो शून्य तत्वको सर्वप्रथम चिन्तन गर्ने प्राच्यकै मनिषी थिए भन्ने कुरा यहाँ स्मरणीय छ । यदि प्राच्यको चिन्तनको उपलब्धि शून्यलाई विस्मृतिको गर्तमा धकेल्ने हो भने २१ औं शताब्दीको हवाला दिने पृष्ठभूमि नै धराशायी हुनेछ ।
Monday, 08.29.2011, 03:54pm
नेपालको संविधानसभा जुन संरचनाको आधारमा गठन भयो यो अत्यन्त जटिल धरातलमा रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बताउँदै आएको छ । यस्तो जटिल संविधानसभाबाट अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकहरूमा विवादरहित संविधान बन्न सकेको इतिहास छैन ।
» सहमतिको रटानमा स्वार्थको दुर्गन्ध
» ‘आणविक अस्त्र’ : त्राससंगै उत्पादको होडबाजी